Radio Arpan 104.5 | जब बैंकले भुलबस ग्राहकका खातामा पठायो २१ अर्ब !
यदि तपाइँको खातामा अचानक लाखौँ रुपैयाँ आयो भने के गर्नुहुन्छ ? वित्तीय अपराध धेरै हुने अहिलेको जमानामा यसरी बैंकमा अकस्मात ठूलो रकम आउँदा खुसी भन्दा धेरै डर लाग्नु स्वभाविकै हो । कहिलेकाहीँ स्वयं बैंकले पनि गल्तीले ग्राहकको खातामा मोटो रकम पठाउँदो रहेछ । बेलायतमा हालै एउटा यस्तो घटना भएको छ ।